नातिनीको आइप्याड | Nagarik News - Nepal Republic Media
आज म तिमीहरूलाई मेरी नातिनी एनिजाको आइप्याडको कथा सुनाउँछु । आइप्याड भनेको सानो ल्यापटप कम्प्युटर हो । एनिजा ४ वर्षकी छिन् । उनी स्कुल पढ्न जान्थिन् । तर कोरोनाले गर्दा उनको स्कुल बन्द भयो । स्कुलले अनलाइन पढाउने भयो । स्कुलले नै उनलाई र उनीसँग पढ्ने सबै नानीबाबुहरूलाई एकएकवटा आइप्याड दिएको छ । त्यही आइप्याडमा मेरी नातिनी एनिजा होमवर्क गर्छिन् । पढ्छिन् । उनी आफैं आइप्याड खोल्छिन् । आफैं चलाउँछिन् । खेल्छिन् । आफैं बन्द गर्छिन् । जानिनन् भने मलाई सोध्छिन् । उनी आइप्याडमा युट्युव खोलेर एविसिडी, वनटुथ्रीका गीतहरू हेर्छिन् । एदेखि जेडसम्म र वनदेखि ट्वेन्टीसम्म फरर आउँछ उनलाई । गीतबाटै अनेक थरीका रङ चिन्छिन् । नाच्ने गीत लगाएर नाच्छिन् । बिहानबेलुका दाँत माझ्न उनलाई त्यही आइप्याडले सिकाएको छ । सधैं नुहाउन, सफा कपडा लगाउन र बेलामा खान उनको आइप्याडले सिकाएको छ । धेरै कुरा जानेकी छिन् मेरी नातिनीले आइप्याडमा ।
नातिनीको आइप्याड उनका लागि शिक्षक भएको छ । उनको अनलाइन क्लास छ । त्यही आइप्याडमा उनले क्लास लिन्छिन् । आइप्याडमै होमवर्क पनि गर्छिन् । तर जति बेला पनि आइप्याडमा झुन्डिन्नन् । बाबुआमा, हजुरबाहजुरआमासँग खेल्छिन् । पिङ खेल्छिन् । बेलामा सुत्छिन् । बेलामा खानेकुरा खान्छिन् ।
अहो, तिमी नानीबाबुहरूलाई मेरी नातिनीको आइप्याडको कथा सुनेर अचम्म लाग्यो होला हगि ! किनकि तिमीहरूले मोबाइल, आइप्याड तथा कम्प्युटर चलाएको देखेर तिम्रो बाबुआमाले गाली गर्नुहुन्छ होला ! हो ? ‘पढेन’ भन्नुहुन्छ होला ! हो ? पक्का हो । तिमीहरू आफ्ना बाबुआमालाई मोबाइल र आइप्याड हेरेर मान्छे बिग्रँदैन भन । तर आमाबुवालाई यसो भन्नुभन्दा पहिले तिमीहरूले आफ्नो बानी फेर्नुपर्छ है ।
एक दिनमा कति घण्टा मोबाइल चलाउने भन्ने कुराको टुंगो लगाउनुपर्दछ तिमीहरूले । कति घण्टा टिभी हेर्ने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ । कुनकुन कार्यक्रम हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिमीहरूले थाहा पाउनुपर्छ । तिमीहरूलाई थाहा छ होला दिन र रात गरेर चौबीस घण्टा हुन्छ । त्यही समयभित्र स्कुल जानुपर्छ । घरमा आएर होमवर्क गर्नुपर्छ । साथीसँग खेल्नुपर्छ । खाना खानुपर्छ । घरका बाबुआमा र दिदीबहिनीसँग बोल्नुपर्छ । आफन्त भेट्न जानुपर्छ । राति कम्तीमा ८ घण्टा सुत्नुपर्छ । तर मलाई लाग्छ कि तिमीहरू हरदम मोबाइल नै चलाएर बस्छौ होला ! पक्का हो । मोबाइल चलाउन थालेपछि खाना खान पनि अल्छी गर्छौ होला । होमवर्क पनि गर्दैनौ होला । टिभी हेर्न थालेपछि आमाबुवालाई पनि टिभी हेर्न नदिई आफू मात्र हेरेको हेरै गर्छौ होला । घरमा आएका आफन्तसँग पनि बोल्दैनौ होला । जतिबेला पनि मोबाइल हेरेर बस्छौ होला । यस्तो गरयौ भने तिमीहरूसँग आमाबुवा मात्र होइन, म पनि रिसाउँछु । आउने पाहुनाले पनि तिमीलाई ‘कस्तो बदमास बच्चा’ भन्ने छन् । मान्छेले बदमास भनेको मनपर्छ तिमीहरूलाई ? पक्का मन पर्दैन ।
नानीबाबुहरू, अहिलेको संसारमा कम्प्युटर चलाउन नजानी ठूलो मान्छे हुन सकिन्न । मोबाइल पनि सानो कम्प्युटर हो । आइप्याड पनि कम्प्युटर हो । यी सबै तिमीहरूका लागि आवश्यक कुरा हुन् । टिभी पनि अहिलेको संसारको नभै नहुने ज्ञान दिने वस्तु हो । यो पनि आवश्यक कुरा हो । यी सबै कुरा सिक्नु आवश्यक छ ।
अहिलेको संसार एउटा सानो मोबाइलभित्र अटाएको छ । मोबाइलभित्र धेरै ज्ञानका कुराहरू छन् । मुख्य कुरा भनेको तिमीहरूले मोबाइल चलाउँदा कति समय चलाउँछौ र कुनकुन कार्यक्रम हेर्छौ भन्ने हो । धेरै समय चलायौ भने तिमीहरू सबै आफन्तबाट टाढा हुन्छौ । नराम्रो कार्यक्रम हेर्यौ भने तिमी पनि नराम्रो हुन्छौ । नराम्रो मान्छे भनेको बदमास मान्छे हो । तिमी पक्का पनि बदमास मान्छे हुन चाहँदैनौ होला । धेरै राम्रो मान्छे हुन धेरै पढ्नुपर्छ । राम्रो मान्छेलाई सबैले मन पराउँछन् । तिमीहरू पनि सबै मान्छेले मन पराउने हुनु है । राम्रो मान्छे हुनु है । राम्रो र ज्ञानी मान्छे हुन केके गर्नुपर्छ भन त ?
ल फेरि सुन म भन्छु – मोबाइल, आइप्याड वा कम्प्युटर हेर्न, चलाउन, पढ्न हुन्छ । चलाएनौ भने पनि तिमीहरूलाई भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ । तर, समय मिलाएर मोबाइल हेर्ने, होमवर्क गर्ने, घरको काम गर्ने र साथीभाइसँग खेल्ने गर्नुपर्छ । आमाबाबु, दिदीबहिनी र दाजुभाइले भनेको मान्ने गर्नुपर्छ । अनि बेलामा खाने र बेलामा सुत्ने पनि गर्नुपर्छ नि । अब त कुरा बुझ्यौ !
सान एन्टोनियो, अमेरिका ।
प्रकाशित: १३ असार २०७७ ११:५५ शनिबार